शब्दकोश: काठमाडौँमा उड्दैन चङ्गा
यो दसैँमा दसैँ मान्नेहरूको निधार त अक्षताले भरिन्छ, तर आकाश भने पूर्ववत् उजाड नै रहनेछ ।
दसैँ सुरु हुने कति दिन अगाडिदेखि र दसैँ सकिएपछिका केही समयसम्म पनि चङ्गाको रङ्गीन झाँकी देखिने आकाश अचेल विधवाको सादापनमा खुम्चिएको पाइन्छ । जाडो याम सुरु हुने बेला उत्सवको स्वागत गरे झैँ खुसियाली मनाउन चङ्गा उडाउने प्रचलन विशेष गरी काठमाडौँकै हो । तर काठमाडौँको त्यो चिनारी पछिल्ला वर्षहरूमा खुइँलिँदै गएको छ । अचेल फाट्टफुट्ट रूपमा मात्र ठिटाहरू चङ्गाको रामरमाइलोमा देखिन्छन् ।
चङ्गा उडाउने क्रम पातलिनुको मुख्य कारण काठमाडौँको बढ्दो जनघनत्व र त्यो घनत्वसँगै घाम समेत देख्‍न मुश्‍किल हुनेगरी थपिएका घरको चापलाई मान्न सकिन्छ । मान्छे हिँडडुल गर्दा मात्रै पनि ‘साइड’ दिनुपर्ने अवस्था आउने महानगरमा अनि कसोगरी पो उडाउनु चङ्गा ? दसैँको समयमा विभिन्न जिल्लाका मान्छेहरू पर्व मनाउन गाउँ फर्किएर काठमाडौँको भीड पातलिने भए पनि चङ्गाका पारखी तन्नेरीहरूमा अचेल जोस भरिएको पाइन्न । त्यसो त मनोरञ्जनका लागि चङ्गा नै उडाउनुपर्छ भन्ने पनि नहोला । मनोरञ्जनका विविध साधन र माध्यम उपलब्ध भएकोले पनि चङ्गातिरबाट युवाहरूको मन ‘चेट’ भएको हुन सक्छ । तर चङ्गाको प्रचलन घट्दै जानुलाई सांस्कृतिक विचलन र परम्पराप्रतिको लगावमा कमी भनेर पनि विश्लेषण गर्न सक्छौँ हामी । मौसमले पनि साथ नदिएर हो कि चङ्गा उडाउनेहरू जिल्लिएका, हावा नचलेपछि चङ्गा उडाउनुको के मज्जा ! :-)
त्यसो त रमाइलो भन्ने कुरा, त्यसमा पनि दसैँको मोजमज्जा खासगरी बालापनमै अँटाउने कोठा हुन् । जति उमेरले छोप्दै जान्छ, जिम्मेवारी र कर्तव्यले किच्दै जान्छ र चाडपर्व मनाउनु भनेको सारमा परम्परालाई निरन्तरता दिने औपचारिकता बन्न पुग्छ । नमनाए वल्ला-पल्ला घरकाले के भनेर कुरा काट्ने हुन्, फेरि असामाजिक पनि भइने डर ! फेरि आफूलाई पनि त वर्षदिनमा तन-मनलाई ऊर्जा दिने रमाइलो बहाना चाहियो । तर यस कुरामा चङ्गा उडाउनुको कुनै साइनो छैन । मान्छेहरू अचेल आकाशमा चङ्गा उडाउनबाट सुस्ताए पनि मनमनमै उडाइरहेछन् । मनमै खुम्चिएर सपनाको नौनी मथिरहेछन् । बाहिर खुसी हुने बहाना पनि उति साह्रो छैनन् । सबै सांसारिक साँगुरोपनबाट जोगिएर पस्न सकिने भरपर्दो थलो आफ्नो मनदेखि बाहेक अरू हुन पनि त सक्दैन नि !
अन्तिममा एक टुक्रा :
सहर जस्तो अप्ठेरो
गाह्रो र साँगुरो
छैन यो मन,
पिङ हाल्न सक्छ्यौ
उडाउन सक्छ्यौ निश्फिक्री
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, October 15, 2010
Dilip Acharya October 15, 2010
यसलाई परम्पराप्रतिको लगावमा कमी भन्ने कि नभन्ने भिन्नै कुरा हो । तर म आफैँ सानो हुने बेलाको कुरा सम्झदा भने आकाशतिर हेर्ने बेलामा चङ्गा नदेख्दा 'दसैँ' आएको छैन कि जस्तो भने लाग्दो रहेछ ।
बडादसैंको हार्दिक शुभ कामना !
वेदनाथ पुलामी (उमेश ) October 15, 2010
धाइबा जी लाइ तर्फबाट तपाइँ लगायत तपाइको परिवारमा यस पालिको बिजय दशमीको पावन अवसरमा सुख, शान्ती, दिर्घायु तथा उत्तरोत्तर प्रगतीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।
धन्यबाद ! शुभ होस् ! शुभ रहोस ! Happy Bijay Dashami …
सूर्य/सिकारु October 15, 2010
अत्यधिक आधुनिकताको जालोले बेरेर नै होला परम्परागत सस्कृतिको लगावमा कमि आएको सायद।
मैले पनि मनको चंगा नै उडाए यसपाली क्षितिजबाट।
दसैंको मंगलमय शुभकामना ! धाइबा जी लगायत यी शब्दमा हातेमालो गर्ने सम्पूर्णमा ।